ကောင်းကင်ကို: မရေးချင်သော အရေးအသား
ဟာ...... မထင်မှတ်တဲ့ထောင့်ကနေ မထင်မိတဲ့ အတွေးတွေစုပေးတာပဲဗျ ။ ကောင်းတယ် ကိုကောင်း
let me share please
Some (maybe) controversial things,afew narrow-minded things, bits of plain stupid and idiotic things,that we Burmese do.!
ငါလုပ် သလို မလုပ် နဲ့..
အတွေးအခေါ်လေးတွေ မြင့်တယ် ကောင်းကင်ကို ရေ။
ပို့စ်တိုတိုလေးတစ်ပုဒ်ပေမယ့် ထိထိလေးပါပဲး)
သဘောကျတယ်။ နောင်ကိုလည်း ဒီလို အကျိုးရှိတဲ့ စာတွေ များများ ရေးနိုင်ပါစေရှင်
ဟုတ်သလိုလို မဟုတ်သလိုလို ကြိုက်သလိုလိုမကြိုက်သလိုလို သူမြင်တာကို ကိုယ်က လိုက်ကြည့် နေမိပြီး ကိုယ်မြင်တာကိုသူ့ကိုပြချင်ပေမဲ့ သူကကြည့်ချင်ပါ့မလား ကိုယ့်အမြင်ကိုသူ့အမြင်ဖြစ်အောင် မပြောပြနိုင်တော့လည်း သူပြတာလေးတွေကိုကြည့်ကြည့် သွားပြီးခေါင်းငြိမ့် ခေါင်းခါရင်း နဲ့ စိတ်မှာပေါ်တိုင်း ရောက်ဖြစ်တယ် ဒီနေရာလေး
Great idea and the most unusual way of thinking bro! Really Outstanding!!!! :)
ဒါမလို့ လက်တော်ကို ကီးဘုတ်ပေါ်တင် ကွန့်မန့်တော် အဖြစ် ရစ်လိုက်တယ်။ ဟီးးးဟီးးး
Vimala Lankara said...
ခရစ်တော်ကို အပျိုစင် မယ်တော်မာရီကမွေးတယ်လို့ ဘယ်ကျမ်းထဲမှာပါတယ်လို့တော့ မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ အဲ ... သေချာတာကတော့ ချက်တော်ကို လက်တော်နဲ့သုံးသပ်လိုက်လို့ သုဝဏ္ဏသာမလေးမွေးလာတယ်ဆိုတာကတော့ ပိဋကတ်သုံးသွယ်၊ နိကာယ်ငါးရပ်ထဲမှာ ဘယ်နေရာမှာမှ မပါပါဘူးခင်ဗျာ။